> Resource> iPod> otú nyefee Music si iPod nano ka Computer
Ruru dị iche iche, dị ka ihe iPod njirimara, i nwere ike amasị nyefee music si iPod nano na kọmputa. Here're ụfọdụ:
Nwetara ọhụrụ kọmputa, otú ị chọrọ nyefee niile music on iPod nano ya n'ihi nkwado ndabere na mpaghara ụtọ.
Computer jiri, ike mbanye e tiwara ma ọ bụ kọmputa e reinstalled. Ya mere, ị nwere ime iPod nano music azụ kọmputa.
Hụrụ ọtụtụ ngosi-etiri songs on enyi gị iPod nano. N'ihi ya, ị na-eche dị ka a na-edegharị ha nile na-gị onwe gị na kọmputa maka òkè.
Otú ọ dị, ọ bụ adịghị mfe idetuo music si iPod nano na kọmputa, n'ihi na iTunes nwere ike na-mmekọrịta music gị iPod nano, ọ bụghị otú azụ. Otú ọ dị, ma e wezụga n'ihi iTunes, bụ n'ebe ọ bụla ọzọ omume nwere ike mee nke a maka gị? N'ezie, ebe a bụ a ziri ezi onye na-arụ ọrụ mma karịa iTunes. Ọ bụ Wondershare TunesGo. Na ya, i nwere ike nyefee songs on iPod nano gị PC ala.
Otú nyefee music si iPod nano na kọmputa
Na akụkụ n'okpuru, m ga-egosi gị mfe nkuzi banyere ibuga songs on iPod nano gị na kọmputa. Ị nwere ike mbụ ibudata a iPod nano na kọmputa transfer na kọmputa gị. Wee mezue ọrụ na anyị.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPod nano na PC mgbe launching a transfer
Nke mbụ niile, wụnye na ẹkedori a iPod nano ka PC transfer na PC gị. Mgbe na-eji eriri USB jikọọ gị iPod nano na gị PC. Mgbe ọma ịchọputa gị iPod nano, nke a transfer ga-egosi gị iPod nano ke akpan window. Mgbe ahụ ị pụrụ ele niile ozi na gị iPod nano na ekpe ndekọ osisi.
Cheta na: Biko ibudata ma wụnye iTunes na kọmputa gị mgbe launching Wondershare TunesGo.
Nzọụkwụ 2. Paghaa iPod nano music na kọmputa
Iji nyefee music si iPod nano na kọmputa, ị nwere ike ozugbo pịa Iji nchekwa na ala nke bụ isi window.
Ma ọ bụ, ị pụrụ iṅomi iPod nano music n'ụzọ dị otú a. Na ekpe kọlụm, pịa Media taabụ. Mgbe media management window bụ ugbu n'akụkụ aka nri, ị kwesịrị pịa Music. Chọta songs na ị chọrọ mbupụ na pịa Mbupụ na. Mgbe ahụ a faịlụ nchọgharị window Pop elu. Mee a ụlọ ahịa ụzọ ịzọpụta gị chọrọ music na PC gị. Na, na, a transfer amalite nyefee music gị na kọmputa. N'oge iPod nano music ebufe usoro, ị kwesịrị ijide n'aka gị iPod nano a nọ ejikọta gị na PC ruo mgbe ebighị ebi.
Cheta na: Wondershshare TunesGo bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na niile iPod nano ụdị: iPod nano 7, iPod nano 6, iPod nano 5, iPod nano 4, iPod nano 3, iPod nano 2 na iPod nano.
E wezụga exporting music si iPod nano gị na kọmputa, ị nwere ike mbupụ ọkacha mmasị gị listi ọkpụkpọ na gị iPod nano azụ kọmputa dị ka mma. pịa Playlist taabụ na ekpe ndekọ osisi. họrọ gị chọrọ listi ọkpụkpọ na pịa triangle n'okpuru Mbupụ na bọtịnụ. na esiri-ala ndepụta, họrọ Mbupụ na iTunes n'ọbá akwụkwọ bọtịnụ.
Nke ahụ bụ mfe nkuzi banyere ibuga music si iPod nano ka PC.
N'ezie, nke a iPod nano ka PC transfer pụrụ inyere gị aka nyefee music si iPod nano ka iTunes n'ọbá akwụkwọ. Ugbu a, ibudata a iPod nano ka PC transfer inwe a na-agbalị!
Watch Video Tutorial nyefee Music si iPod nano ka Computer